Shacabka ku nool magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya waxay la kufayaan isla markaana la daalaadhacayaan dhibaatooyin fara badan oo kaga imaanaya dhinacyada, Al-shabaab, Daacish, Ciidamada
Isagoo niyadda ka jabinaya madaxweynihii hore Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud kuna caanbaxay halkudhigii (Qabyo ninkeedaa dhameestira) kuna sugnaa furitaanka safaaradda Jabuuti ayuu Madaxweyne Maxamed C/laahi Farmaajo oo qudbad ka ...
IFTIIN IYO RAJO KA SOO DHEX-BIDHAANTAY SOOMAALIDA BERGEN.
Ugu horeyn mahad dhammaanteed waxa ay u sugnaatay ALLAAH, naxariis iyo nabadgelyana Rasuulkeenii ayey korkiisa ahaatay, intaas kadib waxaan hambalyo iyo bogaadin aan la soo koobi karin halkaan u marinayaa ...
Duuliyaal somaalia ah oo itobiya ugacan galay
Duuliyihii Itoobiya Qabatay ee kasoo baxsaday. Duuliye Weeydoow waxa uu ku dhashay degmada Buulobarde. Waxa uu wax ku Soo bartay Ruushka. Waxa uu Xeeldheere ku ahaa gad gadoonka miiga waxa uu hawada ...
Kadib markii dowladdii uu hogaaminayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud lagala wareegay talada dalka Soomaaliya waxa ay dad aad u fara badani ku haminayeen in la heli doono ...